FÖRNUFTIG isihlambululi somoya esiphansi esivela ku-IKEA | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 17/03/2021 15:00 | General, Izibuyekezo
Izicoci zomoya seziwumkhiqizo ofunwa kakhulu, kunemikhiqizo eminingi engene ukuze izibeke ngokuqinile emakethe yale mikhiqizo eyingqayizivele, kepha-ke, bekuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuba ifenisha enkulu yaseSweden ifike ukuzenza ngentando yeningi umkhiqizo omiselwe ubekhona emakhaya amaningi ngokwengeziwe.
I-IKEA yethule i-FÖRNUFTIG, isihlanzisi somoya sentengo yokuwa esinamandla amakhulu nezihlungi ezishibhile, sayihlaziya ngokujulile. Hlala nathi bese uthola ukuthi kungani lo mkhiqizo we-IKEA ungathengisa kakhulu futhi umelane nemikhiqizo ebiza kakhulu.
Njengakwezinye izikhathi, sinqume ukuhambisana nalokhu kuhlaziywa okuningiliziwe kwevidiyo lapho uzokwazi khona ukubona ukungavuleki kwesihlanza umoya IKEA, kepha okuningi, sizokukhombisa ukuthi kusebenza kanjani, ungaziguqula kanjani izihlungi futhi yonke imininingwane efana nezinga lomsindo ekwaziyo ukuyenza. Ngakho-ke Sincoma ukuthi ubuke le vidiyo futhi uthathe ithuba lokubhalisela isiteshi sethu, lapho sizoqhubeka nokulayisha ukuhlaziywa okuthakazelisa kakhulu kumikhiqizo yasendlini ezokwenza impilo yakho ibe lula.
1 Idizayini nezinto zokwakha: Ngokwesitayela se-IKEA sangempela
2 Izinhlobonhlobo zezihlungi namandla okuhlanzwa
3 Ukusetshenziswa kwansuku zonke namazinga omsindo
Idizayini nezinto zokwakha: Ngokwesitayela se-IKEA sangempela
Uma okuthile kusebenza ungakuthinti, futhi lokho kuyinto leyo I-IKEA icace bha ngokwakhiwa nezinto zokwenziwa zaleyo mikhiqizo engahlangene nje nefenisha. Yonke imikhiqizo yayo ezenzakalelayo, umsindo noma i-gadaget ithembele kupulasitiki ofanayo, i-shades efanayo nedizayini efanayo, futhi lokho kusisiza ukuthi sakhe indawo enobunye nesici. njengoba ubona ekubuyekezweni kwethu kwamalambu nezipikha i-IKEA eyakhele iSonos. Kulokhu bayangivuma, kodwa bangamangala kancane.
Ubukhulu: X x 45 31 11 cm
Isisindo: I-3,92 Kg
Sibheja ngepulasitiki emhlophe noma emnyama ukuze ivumelane nomthengi kanye nephaneli langaphambili lendwangu elimpunga, okulula ukusikhipha. Zonke lezi zinto zinikeza ukuhlanganisa okulula, ukumelana nokukhanya kumkhiqizo, kude nokufuna ukuzwa premium, abakufunayo ukulungisa intengo nokuqina kwayo. Ngemuva sinezisekeli, futhi isihlanzisi somoya se-IKEA singabekwa ngokuvundlile nangokuqondile, iboshelwe odongeni noma iyaphatheka ngokuphelele ngokuhlanganiswa nesibambo sayo senayiloni kanye nosekelo lonyawo olufakwe ngokuphelele ebhokisini nasekufaniseni umbala womkhiqizo.
Ibhokisi linamakhadibhodi asebenza njengamamaki okuyiqinisa ihange odongeni (ungayilahli)
Kokubili i-kickstand (efakiwe) nesibambo senayiloni kuyalungiswa
Kokubili isibambo senayiloni kanye nosekelo lwenyawo kwenziwa ngokuphelele Isuswe, ezokwenza lula ushintsho lomqondo ngokuya ngomhlobiso. Ngemuva sizoba nesiqondisi sekhebula esihlanganisiwe esizosivumela ukuthi sisinike izikhundla ezahlukahlukene ngaphandle kwesidingo sokubona izintambo zilenga odongeni. Le khebula, ngakolunye uhlangothi, inesandla esivulekile futhi ine-adaptha yamandla ethile yomkhiqizo.
Izinhlobonhlobo zezihlungi namandla okuhlanzwa
Kulokhu isihlanzisi somoya I-FÖRNUTFIG evela ku-IKEA Ingasetshenziswa ngezihlungi zayo ezimbili ngasikhathi sinye, noma ngesihlungi esikhulu. Lokhu kungenxa yokuthi enye yazo ifakiwe kuphakheji kanti enye izothengwa njengenketho uma sifisa. Lezi izihlungi ezimbili ezakha i-IKEA air purifier
Isihlungi se-HEPA 12: Sinesisefo esivulekile esifakwe ngosayizi omkhulu, lesi sihlungi sithatha ama-99,95% ezinhlayiya ezisemoyeni ezifana nempova, inokusebenza okufika ku-PM2,5, okusho ukuthi igcina izinhlayiya ezinkulu kunezinanometer ezingama-2,5. Lokhu kuzothengwa ngokwehlukana kusuka ku-5 euro ngqo ku-IKEAkepha, iyunithi ifakiwe kwiphakheji.
Isihlungi segesi: Lesi isihlungi esikhethekile futhi senzelwe ukunciphisa ubukhona bephunga nentuthu, kunalokho ngenhloso yokwakha umuzwa wenhlanzeko nokuhlanzeka emoyeni, kepha ngaphandle kokugcinwa kwezinhlayiya. Lesi sihlungi sizohlala sinohlamvu "olwengeziwe", yingakho luthengiswa lodwa. kusuka kuma-euro angama-10 nasezitolo ze-IKEA. Lokhu kuhlanza umoya ngokususa okuhlukahlukene ukungcola okufana ne-VOC kanye ne-formaldehyde.
Idivayisi izosebenza ngokufunwa, okungukuthi, kuzodingeka siyisebenzise. Ayinalo uhlelo lokuhlaziya umoya noma izexwayiso ezingaphezu kwesikhombi se-LED sesimo sokuhlanza kwezihlungi nenkinobho ye-RESET yayo ngemuva kwekhava langaphambili. Uma sesikucacisile lokho, sithola amazinga amathathu wokuHlanzwa nge-roulette ephezulu. Endabeni yokusebenzisa amandla amakhulu, izinga lokukhishwa komoya kwamahhala wezinhlayiya (inani le-CADR) lingu-130 m3 / h.
Ukusetshenziswa kwansuku zonke namazinga omsindo
Amazinga omsindo azoncika ngqo ezingeni lamandla owabelwe, ezingeni eliphansi umsindo ucishe ungabonakali (kungabonakala kuvidiyo engenhla), noma kunjalo, izinga lomsindo wamandla amakhulu lifana nelomlandeli wendabuko ngamandla aphansi. Ngakho-ke, izinga eliphansi livumela impilo ejwayelekile yansuku zonke futhi lize lilale nalo livuliwe, hhayi ezingeni eliphezulu kakhulu, elibukeka lenzelwe izimo zentuthu noma impova eyeqile. Lokhu kuzosiza ukuthuthukisa impilo nempilo yansuku zonke yabantu abanezifo ezingezwani nokwaliwa.
Ekusetshenzisweni kwansuku zonke le purifier ikhiqiza ukusetshenziswa kwansuku zonke okuphakathi kuka-2,5 no-19 watts, incane impela, ngakho-ke akufanele sikhathazeke ngalesi sigaba. Kumele kuqashelwe ukuthi ikhebula lokuxhuma liphana impela futhi isibambo senze kwaba lula kakhulu kimi ezivivinyweni zami ukuyihambisa ngamakamelo ahlukene. Ukusetshenziswa kwemizuzu engama-45 egumbini elinezihlungi ezintathu kuqeda ngokuphelele iphunga elibi lakusasa elijwayelekile, Ngokufanayo, ukusebenza okufanayo ekhishini kususe ngokuphelele iphunga ekudleni. Kodwa-ke, ukuze wazi ngokuningiliziwe ngemiphumela yayo maqondana nempova nezinye izinhlayiya, kungadingeka ukuhlaziya umoya ngesikhathi sangempela, futhi lokho kuyisihluthulelo senani elishintshiwe.
Akungabazeki IKEA buyela ku kuqhume imakethe yegajethi yemfashini yamakhaya, le purifier yomoya izikhombisa ngokwanele futhi ifaka idizayini enobungane, iyenze ngama-euro angama-59 kuphela iba ukukhetha kokuqala kwamakhasimende ajwayelekile wefemu yaseSweden.
Kuthunyelwe ku: I-17 March ka-2021
Ukulungiswa kokugcina: I-14 March ka-2021
Izinto ezaziwayo nokuklanywa
Hlunga okuhlukahlukene nokusebenza kahle kokuhlanzwa
Ngaphandle kokuhlaziya ikhwalithi yomoya
Ikhebuli yokuxhuma iphathelene
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » FÖRNUFTIG umshini wokuhlanza umoya osezingeni eliphansi kusuka ku-IKEA
Izipho ezihamba phambili zobuchwepheshe zosuku lobaba